कोहीयति मन पर्छन् कि भन्न मात्र सकिन्न:गायिका मेलिना राई - USNEPALNEWS.COM
भारतको दार्जिलिङमा बाल्यकाल बिताएकी मेलिना राई पाश्र्वगायनमा जम्दै गरेको नाम हो । सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी उनलाई फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल–३’ को ‘कम्मरमाथि पटुकी’ बोलको गीतले बढी चर्चा दिलायो । ‘पलभरमै खुशी’, ‘डुब्दै गएँ म’, ‘माया मलाई’, ‘छाडी जाने भए जाऊ मायालु’ उनका रुचाइएका गीत हुन् ।
कसरी गाउने रहर पलायो ?
तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको थियो फिल्ममा यसरी गीत गाउँछु भनेर ?
प्रेम अनुभव चाहिँ छ कि छैन ?
भाइरल बन्दै भाइरसः नजिकै खोकी रहेको व्यक्ति छन् भने सजग हुनुहोस्